ကျွန်မ မဆုမွန်ပါ။ အခု ကိုမောင်လှတင်ထားတဲ့ ပုံလေးကို ကျွန်မ ဘလော့မှာ ယူတင်ချင်ပါတယ်..ဒီရက်ပိုင်းတွေ ရဟန္တာကောင်းကင်ပျံတာမျိုး ဗီဒီယို နဲ့ အခုလဲ ဘုရားရုပ်တုတော် မျက်လုံးတော် ပွင့်တာမျိုးလေးတွေ ဖတ်ရတော့ မြန်မာနှစ်ကူးမှာ တစ်ခုခုများ ထူးခြားတာ ရှိမလားဆိုတာ ပို့စ်လေး တင်ချင်လို့ပါ..ခွင့်ပြုပါနော်
ယူသုံးပါ... တကယ်ဖွင့်နေလား မဖွင့်ဘူးလားဆိုတာကတော့ ချင့်ချိန် သုံးသပ်ပါ...
www.amayeainn.blogspot.com မှာပြန်တင်ဖို့ ယူသွားပြီနော်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...
ကိုမောင်လှရေ အခု ကိုမောင်လှတင်ထားတဲ့ ပုံလေးကို Asian Travel က Myanmar New မှာ တင်ချင်ပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
news from Bi weekly Journal http://forums.nativemyanmar.net/richedit/upload/2k5e8d4845ad.jpg
If you take Maharmyanmatmuni
image photo by yourself.Why did
you write gossip.You should write
ကောလဟလတွေ အတော်များများ ထွက်နေတယ်။
1) ကျိုက်ထီးရိုးလား။ ကျိုက်ရိုးဂိုးလား။
3) မျက်လုံးတော်တစ်ဘက် ဖွင့်
Thint Swe said…
I think it's because of lighting & shadow. But everytime, when people want to get something changes or they hope something, there isalot of "Kaw La Har La". It's use to be.
I hearalot of impossible humors , opening an eye of Buddha statue,amagic monk flying in the sty. for those who are in abroad like me, we are curious for that unproved events. So, I'ld like you all guys inside Burma to share information happening currently by putting them on the blogs .
ဒီပုံလေး အမ ကူးသွားပါရစေရှင်
Shwe Thiri Khit said…